कतारमा रोजगारदाता ( कम्पनी वा ब्यक्ति ) परिवर्तन गर्न यी प्रक्रिया अपनाउनुहोस्। - Malayakhabar
होम पेज कतार विशेष कतारमा रोजगारदाता ( कम्पनी वा ब्यक्ति ) परिवर्तन गर्न यी प्रक्रिया अपनाउनुहोस्।
कतारमा रोजगारदाता ( कम्पनी वा ब्यक्ति ) परिवर्तन गर्न यी प्रक्रिया अपनाउनुहोस्।
कतार := पछिल्लो समय कतार सरकारले रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने नयाँ नियम ल्याएको छ। नियम अनुसार तपाईँ यदि रोजगारदाता परिवर्तन गर्न चाहेमा पहिलो रोजगारदाताको अनुमति चाहिँदैन । तपाईँको इच्छा अनुसार काम परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।
कसरी गर्ने त काम परिवर्तन ?
१. रोजगारदाता (कम्पनी वा व्यक्ति ) परिवर्तन गर्दा सूचना दिनुपर्ने।
दुई वर्षभन्दा बढी अवधि काम गरेका भए २ महिनाको सूचना दिने । २ वर्षभन्दा कम अवधि काम गरिरहेको भए १ महिनाको सूचना दिने । रोजगारदातासँग भएको करारको म्याद सकिने मितिभन्दा ३० दिनअघि सूचना दिनुपर्छ । करार पत्रमा करारको म्याद सकिने मिति उल्लेख नभएमा ५ वर्षपछि मात्र सूचना दिन सकिने।
यस्तोमा ५ वर्ष पछि सूचना दिँदा ६० दिनको सूचना दिने । सूचनासँगै छाड्न चाहेको रोजगारदातासँगको करार पत्र, त्यो नभए रोजगारी दिने पत्र अर्थात नयाँ रोजगारदाताले दिएको कामको अफर पत्र र जान चाहेको रोजगारदाताले अरबीमा लेखेको जागिर दिन्छु भन्ने पत्र र रोजगारदाता परिवर्तन गर्न भरेको फारामसमेत संलग्न गर्नु पर्दछ।
रोजगारदाता परिवर्तनको सूचना दिँदा कतारको श्रम मन्त्रालयको सूचना प्रणाली Electronic Notification system of ADLSA लिंकमा गएर दिने । सूचना दिईसकेपछि कामदार र जान चाहेको रोजगारदाता कम्पनीलाई एसएमएसबाट जानकारी आउँछ।
२. नयाँ रोजगारदातासँग रोजगार करार गर्ने । नयाँ रोजगारदाता कम्पनीले कामदारसँग छलफल गरी करार पत्र बनाउनेछन् । करार पत्र कतारको श्रम मन्त्रालयवाट प्रमाणिकरण गर्नको लागि Digital Authentication लिंकमा गएर गर्ने।
३. कतारको नयाँ आईडी बनाउने । करार पत्र प्रमाणिकरण भएपछि नयाँ रोजगारदाता कम्पनीले कतार आईडीको लागि मिनिष्ट्रि अफ इन्टेरियरमा अनुरोध गर्ने । नयाँ रोजगारदाता कम्पनीले कतार आईडी र हेल्थ कार्ड बनाइदिनुपर्छ।
अघिल्लो लेख राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म डा.युवराज खतिवडालाई पदैपद।
पछिल्लो लेख सुदूरपश्चिमेलीहरुले ढकारी गाउँपालिकाको विभिन्न वडामा राहत सामाग्री बितरण गरेका छ्न।
कतारमा कार्यरत आप्रवासी घरेलु श्रमिकमाथि यौन दुव्र्यवहार र शोषणः एम्नेष्टि।
कतारमा रहेका सबै नेपालीहरुले कोरोनाभाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन नि:शुल्क पाउने।